We She Me: မြင့်မြတ်နိုး အတွက် လက်ဆောင်
| FLAGS: He , We
အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့ ရွှေဂျမ်း - 1/28/08, 6:25 PM
Congrats to the we-she-me family!! သတင်းကောင်းလေးကို ဖတ်ရလို့ ၀မ်းသာ မိပါတယ်။
imaginary clouds no2- 1/28/08, 9:23 PM
ဒီစာကို ဖတ်စတုန်းက အက်ဆေးလို့ ထင်နေတာ ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဝမ်းသာမိတယ် အန်ဒီ။ ကောင်းတယ် ။ တကယ့်ကို ဝမ်းသာတယ် ။ ယောက်ျားလေးဆိုတော့ ကြီးလာရင် မျက်နှာပွင့်မယ် ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲ။ ဘလော့မှာ သားရေးသမီးရေး အောက်မှာ ထည့်ထားလိုက်မယ် ။ ဝမ်းသာတယ် ။ သားလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခြားသူများအတွက် (ပွဲတွေ့ အတွေ့ အကြုံများ) ဆက်ရေးနိုင်ပါစေလို့ တဆက်တည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။
nu-san - 1/28/08, 10:09 PM
Andy နဲ့ တုန်တုန်တို့ မေမေရေ.. ပျော်စရာကြီးနော်.. အိမ်နားနီးလို့ကတော့ တုန်တုန်ကို ခေါ်ထားတယ်.. အားကျလိုက်တာ.. မနာလိုတော့ဘူးနော်.. ဟား..ဟား..
Andy တို့အတွက် တကယ်ဝမ်းသာတာပါ.. အခုမှ ကြွားရတယ်လို့.. စောစောကတည်းက ကြွားရင် စောစော သိရပြီး ၀မ်းသာလို့ရတာပေါ့.. ယောင်္ကျားလေး ၁ ယောက်၊ မိန်းခလေး ၁ ယောက်ဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်.. အဟက်. တုန်တုန်တုန်းကလို ပန်းပန်ပြီး တရုတ်ကျောင်းသွားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်.. အင်း.... ဒီကလေးလေးလည်း blog ပေါ်ကနေပဲ ချစ်ရဦးမယ်...
Anonymous - 1/28/08, 11:48 PM
congratulations.... very glad to hear
War War - 1/28/08, 11:49 PM
Wahh.. Congratulation Ko Andy andama.
Very glad to read this post. Naut ta yaut ka thar lay so tot po good thwar tar pot. Thar kaw tha mee kaw ta myo si chit ya tar pot. :)
Kay - 1/29/08, 12:50 AM
၀မ်းသာစရာ သတင်း ပါလား။ အရမ်း ကို ၀မ်းသာ ..အားကျ ပါတယ် ကိုအန်ဒီရေ.. ပျော်ရွှင်ပါစေ။ သူမ ကိုလည်း နှုတ်ဆက်ပါတယ်။း)
အိမ်းတို့အိမ် - 1/29/08, 4:22 PM
heartfully congratulation....ko andy and sis ...and တုံတုံ.. aswell.
Andy Myint - 1/29/08, 9:04 PM
ရွှေဂျမ်းရေ..... ကျေးဇူးပါ။ ဖတ်ပြီး ၀မ်းသာတယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
မောင်တိန်.... အေးဗျာ.. ကျွန်တော်ကလည်း အတည်ကြီးနဲ့။ ဒီလို သတင်းကို။ ရေးဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း ပွဲတွေ့တွေ ရေးလိုက်မယ်။
မနု-စံ..... ပြောမလို့ပဲ။ အိမ်ကိုတောင် ၃လလောက်မှ ပြောဖြစ်တယ်။ သေချာအောင် စောင့်တာနဲ့... ပြီးတော့ Detailed Scan လုပ်မယ်ဆိုတော့ ဘာလေးလဲ သိအောင်စောင့်တာရယ်၊ သိပြီးတော့ ရေးဖို့ ကြာနေတာရယ် ကြောင့်ပါ.. အဟဲ။ အနားမှာ ရှိလို့ကတော့ ကလေး ၀ိုင်းထိန်းလို့ ရတာပေါ့.. အဟီး။
Dear Reader (Anonymous), thank you for your words.
ကျေးဇူးပါ။ ၀ါဝါတို့ အလှည့်ရော... ဟဲဟဲ။ အချိန်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပါးလိုက်ပါဦး။
ဟုတ်တယ် မကေသွယ်။ ပျော်ရပါတယ်။ သူမကလည်း မကေရဲ့ စာတွေကို ကြိုက်တယ်တဲ့။
Thanks... အိမ်း။ အိမ်းတို့ အိမ်လေးကို ဆက်ဆောက်ဦးလေ။ ဓါတ်ပုံလေးတွေ အမှတ်တရလေးတွေနဲ့ အပျော်တွေ ဝေမျှပါဦး။ အမှတ်တရလည်း ဖြစ်တာပေါ့။ ဆက်လုပ်ပါဦး။ အားပေးမှာပါ။
မွန် - 1/29/08, 10:22 PM
ဒါပေမယ့် တုံတုံးတုံလေးကိုပဲ တီတီကတော့ ပိုချစ်မယ် တိလား
စိုးထက် - Soe Htet ! - 1/29/08, 11:57 PM
ကျွန်တော်က ထပ်ယူဖို့ ညှိနှိုင်းဆဲဗျ ... ၃ ယောက် လောက် မွေး မလားလို့ ... :D
pandora - 1/30/08, 4:33 AM
wow! Congrats, ko Andy.
Go ahead. hee.
Soe - 1/30/08, 2:06 PM
ဒါနဲ့ ၃ယောက်မြောက်ကလေးကိုယောက်ျားလေးလိုချင်လား၊မိန်းကလေးလိုချင်လား? :)
Andy Myint - 1/30/08, 10:44 PM
ကောင်းတာပေါ့ မွန်ရယ်.... တုံတုံးတုံလေးကို တီတီ ထိန်းပေါ့။
ကျွန်တော်တော့ ကိုစိုးထက်ကို ကျော်တက်သွားပြီ။ ကိုစိုးထက် ယူဦးမယ်ဆို အားပေးတယ်။
ကျေးဇူး ပန်ဒိုရာ.. အမြန်သာ လိုက်ခဲ့ဗျာ။ ဒါမျိုးဆိုတာ စောလေ ကောင်းလေပဲ။
ထီပေါက်တာတို့ ဘာတို့ဆိုရင်တော့ ၃ ယောက် ယူမယ်ဗျာ။ အမြွာဆိုရင် ပိုကောင်းတယ်။ ဟားဟား။ အခုတော့ ၂ ယောက်နဲ့ လုံလောက်ပါပြီဗျာ။
Anonymous - 1/31/08, 12:23 AM
Bravo Ko Andy :P You2are so lucky with one daughter and one son. Your blog audience wishing for Thu Ma's birthday with thinking of future kids. It became true at that time. I believe you2will adjust attention to both son & daughter :)
Anonymous - 1/31/08, 12:32 AM
Ko Andy..if due date is in late May, is it in sign of Gemini or Taurus? Pls view this link to know about Rat year born child
TZA - 1/31/08, 3:34 AM
အာ.. အားကျတယ်ဗျာ၊ တကယ်ပါ။
Andy Myint - 1/31/08, 11:34 PM
Dear Reader, we thought it was known :-) Yeah, wishes turn out to be realise. Thanks for the link. I reckon his sign will be gemini.
အားကျရင် ကောက်တင်ဗျာ.. ဒါမှမဟုတ် တော်ကောက်ဗျာ။ ကျေးဇူပဲ ကိုသန့်ဇင်အောင်။
Anonymous - 2/11/08, 3:07 AM
ko andy & A Ma,
congrats to u guys! :)
Andy Myint - 2/11/08, 10:07 PM
ကျေးဇူးပါ.. ဂျစ် :)